Imisa Sharci ayuu ansixiyay Baarlamaanka Soomaaliya intii uu socday Kalfadhigii 5-aad? – Kalfadhi
October 12, 2019 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ah ayaa 27-kii bishii March ee sanadkan 2019 si rasmi ah u furay kalfadhigga shanaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Baarlamaanka ayaa intii uu socday Kalfadhigaasi, waxaa uu meel-mariyay sharciyo, waxaana jira kuwa kale oo sugaya in aqrin kale ay maraan.
Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa uu ansixiyay shan sharci intii uu socday Kalfadhigii shanaad ee lasoo dhaafay. Waxaa uuna aqrinta 1-aad iyo 2-aad mariyay 14 hindise-sharciyeed. Waxaa sidoo kale aqrinta 1-aad sugaya 4-hindise-sharciyeed.
Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya intii uu socday Kalfadhigii 5-aad waxaa la horkeennay mooshino kala duwan, balse waxaa ay noqdeen kuwo aan meel-marin.
Waxyaabaha lagu xasuusto Kalfadhigii 5-aad waxaa kamid ahaa, in kulankii u horreeyey ee kalfadhigga 5aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya u baaqday kooram la’aan. In kabadan 15 xildhibaan ayaa Guddoonka baarlamaanka u gudbiyay warqad ay ku dalbadeen in ajandaha kulanka maanta lagu darro arrimaha amniga.
Xildhibaanadan ayaa sheegay in xildhibaannada dowladda taageersan ay kulanka ay ka baaqdeen sababo la xiriira ajanadaha ay u gudbiyeen guddoonka.
Sharciyadda Baarlamaanka horyaalla ee aan wali labada aqal aanu soo marin waxaa kamid ah sharciga Saxaafadda oo golaha shacabka uu ansixiyay balse aqalka Sare uu horyaallo.
Bishuu July ee Sanadkan, xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, oo yeelay kullankoodii 24-aad ee kalfadhiga 5-aad, ayaa ansixiyay Sharciga Saxaafadda.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi (Farmaajo), ayaa Arbacadii lasoo dhaafay furay kal-fadhiga Lixaad labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, kaddib laba Bilood oo ay fasax ku maqnaayeen Xildhibaannadu.